कलेजो - को पेट को सही पक्षमा स्थित, डायफ्राम तलको शरीर को अत्यावश्यक अङ्गहरू एक। यो करङहरु सुरक्षित छ। जिगर अग्न्याशय र आन्द्रा साथ पाचन प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। detoxification, प्रोटिन संश्लेषण र बायोकेमिकल्स को उत्पादन पाचन लागि आवश्यक: यसको मुख्य कार्य केही।
शरीर bile secretion, प्रोटिन उत्पादन, रगत clotting, glycogen भण्डारण, रातो रक्त र एमिनो एसिड को अपघटन लागि आवश्यकता भनिन्छ बढवा दिन्छ। जिगर पनि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, बोसो र हर्मोन उत्पादन को चयापचय संलग्न छ।
यस लेखमा हामी भने अंग मा क्यान्सर को निदान यसको उपचार बित्दै कसरी हेर्न। जिगर मा Metastases तिनीहरूले फेरि देखिने के गर्न रूपमा सही भविष्यवाणी अनुमति छैन, र कुनै पनि मामला मा रोगी आफ्नो अवस्था नियन्त्रण र एक डाक्टर हेर्न जीवनकालमा हुनेछ।
मेटास्टेसिस के हो
क्यान्सर जिगर मा वितरण गरिने जोखिम, प्रारम्भिक गठन स्थान मा निर्भर छ। Metastases -, जिगर गर्न शरीर मा अन्यत्र बाट उदाहरणका लागि फैलिएको थियो कि एक घातक ट्यूमर। यो तिनीहरूले माध्यमिक भनिन्छ sluche कलेजो क्यान्सर। प्राथमिक असामान्यता शरीर मा हुन्छ। तर पनि यदि ट्यूमर छ हटाइयो, मेटास्टेसिस को धेरै वर्ष पछि फेरि कलेजो मा प्राप्त हुन सक्छ।
रोगी क्यान्सर संग को निदान गरिएको छ भने, यो संकेत थाहा र हामी व्यवहार कसरी कल्पना गर्न महत्त्वपूर्ण छ। कलेजो metastases एक विशेषज्ञ द्वारा एक विरामी भनेर फलो-अप आवश्यक पर्दछ।
मेटास्टेसिस को प्रक्रिया
त्यहाँ metastases को गठन को6चरणमा छन्। सबै malignancies उहाँको पछि, तर प्रायजसो, र प्रगति मा:
क्यान्सर कक्षहरू नजिकका अंगहरु वा स्वस्थ ऊतक मुख्य स्थानबाट सार्न।
Metastases लसीका र रक्त नली को पर्खाल को माध्यम ले उत्प्रेरित हुन्छन्।
क्यान्सर कोशिकाहरु को लसीका प्रणाली र शरीर को अन्य भागहरु गर्न रगत मार्फत बसाइँ सर्छन्।
तिनीहरूले लक्ष्य पुग्न गर्दा सार्दा रोक्नुहोस्। त्यसपछि capillaries (सानो रक्त नली), पर्खालहरु लैजान र आसन्न ऊतकहरुमा भित्र पस्नु metastases।
क्यान्सर कक्षहरू टाढा ठाउँमा बढ्न र सानो ट्यूमर भनिन्छ micrometastasis सिर्जना गर्नुहोस्।
घातक ट्यूमर को विकास को लागि अक्सिजन र आवश्यक पोषक आपूर्ति नयाँ रक्त नली सिर्जना प्रोत्साहित गर्न यी formations।
केही कारणले, धेरै घातक ट्यूमर जिगर गर्न metastasize
जिगर मा घातक ट्यूमर को स्थानीयकरण गर्न मुख्य रूप कारण गैस्ट्रिक क्यान्सर र esophagus। तर अक्सर फोक्सो क्यान्सर कारण जिगर metastases मा गठन रूपमा। उपचार (यसको बारेमा टिप्पणी मिश्रित छन्) मात्र होइन लक्षण मा तर पनि आफ्नो कारण मा निर्देशित छ।
राम्रो परिसंचरण र विशेष कार्य कलेजो घातक कक्षहरू यो कारण prityagaelnost। हरेक मिनेट therethrough रगतको 1.5 लिटर विस्तार। यो शरीर विषाक्त पदार्थ देखि रगत सफाई को लागि पट एक प्रकारको छ।
Metastatic कक्षहरू जहाँ रगत प्रवाह एक कम गति मा आयोजित छ ती क्षेत्रमा सञ्चय छन्। गठन गर्दै यो सिद्धान्त र कलेजो metastases अनुसार। अन्य अङ्गहरू मा गैर-proliferation उद्देश्य हुनत अग्नाशयी क्यान्सर, जो को उपचार, यसलाई उदाहरणका लागि रोग यसको अन्तिम चरणमा छ, विशेष गरी यदि शरीर वर्णन, असर गर्न सक्छ, अझै पनि छ।
रोग को Symptomatic प्रकटीकरण
दुर्भाग्यवश, प्रारम्भिक चरणमा त्यहाँ जो क्यान्सर को उपस्थिति निर्धारण गर्न सक्छन् कुनै संकेत, छन्। कलेजो क्यान्सर को पछि चरणमा यसलाई सुनिनु गर्न सक्छ। जब यो हुन्छ, तपाईं निम्न लक्षण अनुभव:
सुनिंनु या flatulence;
पीलिया (छाला र आँखाको सफेद को पहेंलो);
सही काँध मा दुखाइ;
को भुँडी माथिल्लो दायाँ भाग मा दुखाइ;
डराएको र ज्वरो;
को जोडना पिंजरे तलको भुँडी को सही पक्षमा टक्कर।
शारीरिक परीक्षा समयमा, आफ्नो डाक्टर जिगर को क्यान्सर शक सक्छ। र यदि माथि लक्षण को एक रोगी bothering छैनन् निदान पुष्टि गर्न थप परीक्षण गर्न आवश्यक हुनेछ।
यो रगत सीरम मार्कर को स्तर निर्धारण गरिन्छ। रोग को उपस्थिति मा उच्च स्तर हुन सक्छ अल्फा-fetoprotein (एएफपी)। कलेजो इन्जाइमहरु अक्सर उच्च छन्।
पेट सीटी बाहिर। यो नरम Tissues को दृश्य चित्र, विस्तार अंगहरु प्रदान गर्दछ एक्स-रे को एक विशेष प्रकारको छ।
अल्ट्रासाउंड कलेजो। यो पनि echography भनिन्छ। को अल्ट्रासाउंड शरीर मार्फत उच्च आवृत्ति ध्वनि छालहरू पहुंचाता। शरीर नरम Tissues एक कम्प्यूटरीकृत छवि - यी ध्वनि छालहरू त्यसपछि नक्सा सिर्जना गर्न प्रयोग गरिन्छ जो एक प्रतिध्वनि, उत्पादन।
चुम्बकीय अनुनाद (एमआरआई) आन्तरिक अङ्गहरूको धेरै स्पष्ट चित्र उत्पादन गर्छ।
Laparoscopy। डाक्टर उज्यालो र एक बायोप्सी एक संकीर्ण ट्यूब (laparoscope) प्रयोग गर्नुहोस्। उपकरण सानो चीरा मार्फत सम्मिलित र माइक्रोस्कोप अन्तर्गत परीक्षा को लागि सामाग्री लिन छ। Laparoscopy - क्यान्सर को न्यूनतम इनवेसिव निदान सबैभन्दा विश्वसनीय विधि।
के कारक उपचार निर्भर
खुसीको कुरा, चिकित्सा प्रविधिहरू विकास कलेजो metastases लागि थप प्रभावकारी उपचार प्रदान गर्दछ, र पनि विरामीहरु आशा दिन्छ। हाल, metastatic क्यान्सर को उपचार को लागि प्रयोग गरिन्छ कि धेरै विकल्प छन्।
सामान्यतया, चिकित्सकीय हस्तक्षेप को छनोट बिरामीको उमेर र स्वास्थ्य, आकार, स्थान र metastatic ट्यूमर, क्यान्सर को प्राथमिक स्थान र रोगी इतिहासको neoplasms को प्रकार को नम्बर को सामान्य राज्य निर्भर हुनेछ।
कलेजो क्यान्सर मेटास्टेसिस को Systemic उपचार रगत मार्फत हुन्छ। धेरै विधिहरू चिकित्सा प्रयोग गरिन्छ:
केमोथेरापी: उपचार को फारम क्यान्सर कक्षहरू मार्न लागूपदार्थ प्रयोग।
BRM उपचार: उपचार विशिष्ट एंटीबडी, वृद्धि कारक, र सुइहरु प्रयोग। यी additives बढावा वा क्यान्सर लड्न प्रतिरक्षा प्रणाली को क्षमता पुनर्स्थापना इरादा गर्दै छन्।
लक्षित उपचार। जिगर मा Metastases लागूपदार्थ र यस्तो प्रयोगशाला बनेको र क्यान्सर कक्षहरू पत्ता लगाउन डिजाइन मोनोक्लोनल एंटीबडी अन्य पदार्थ को माध्यम द्वारा नाश छन्। यो उपचार अन्य विधिहरू भन्दा कम साइड इफेक्ट छ।
हर्मोन उपचार। यो ढिलो वा केही ट्यूमर को विकास रोक्न प्रयोग गरिन्छ।
स्थानीयकरण उपचार। जिगर मा Metastases मात्र स्थानहरू loklizatsii मा, sighting नष्ट छन्। यो रोग को प्रारम्भिक चरणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
विकिरण उपचार। यो क्यान्सर कक्षहरू मार्न र ट्यूमर कम गर्न उच्च ऊर्जा विकिरण प्रयोग गर्दछ।
सर्जिकल हटाउने। यदि कलेजो मात्र एउटा सानो भाग प्रभावित घातक ट्यूमर को एक सानो संख्या छ यो सम्भव छ।
मेटास्टेसिस मुख्य शरीर देखि क्यान्सर को प्रसार बुझाउँछ। कुनै पनि आकार को उपचार टाढा अंगहरु नराम्रो कक्षहरूको प्रसार को अक्षांश मा निर्भर गर्दछ। क्यान्सर अन्य Tissues गर्न सर्छ भने, यो रोगी अस्तित्व प्रतिशत कम गर्न सक्छ।
Resection र यसको आचरणको पूर्वानुमान
तथ्याङ्क डाटा गैस्ट्रिक क्यान्सर (कलेजो metastases), उपचार सही र प्रभावकारी थियो संग विरामीहरु, अझै पनि एक गरीब पूर्वानुमान छ भन्ने। यी मान्छे को लागि अस्तित्व दर, दुर्भाग्य, सबै भन्दा कम छ। चिकित्सा पछि विरामीहरु को 20% भन्दा कम3वर्ष को लागि बच्न मौका छ।
कलेजो metastases को resection को नैदानिक प्रभावकारिता अझै पनि साधारण मानिन्छ छैन। तर, गैर-शल्य चिकित्सा उपचार सन्तोषजनक परिणाम हासिल छैन। विरामीहरु केमोथेरापी भइरहेको, औसत अस्तित्व 2.9 11.8 गर्न महिनाका दायरा।
गैस्ट्रिक क्यान्सर र कलेजो metastases को पूर्वानुमान सम्बन्धित Clinico-रोग सुविधाहरू पूर्ण छैन विचार गरिएको छ। यद्यपि, यो महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू आफ्नो उपस्थिति सांख्यिकीय विरामीहरु लागि महत्वपूर्ण प्रतिकूल prognostic कारक हो।
यो सञ्चालनको क्षेत्रमा तरल पदार्थ संग्रह रोक्न गर्न पेट गुहा को एक अल्ट्रासाउंड परीक्षा पूरा गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनभने रोगी को resection पछि, डाक्टर को पर्यवेक्षण अन्तर्गत राखिएको हुनुपर्छ। अस्पताल देखि छुट्टी पछि, उहाँले कमजोरीको वशमा पऱ्यौं जोगिन गर्न दुई वर्ष जांच गर्न हरेक तीन महिना बाध्य छ।
लोक उपचार (कलेजो metastases)
अपरंपरागत विधिहरू पनि क्यान्सर को उपचार मा उपयोगी छन्। तर तिनीहरूले मात्र यसको विकास प्रारम्भिक चरणमा प्रभावकारी छन्।
उचित पोषण पालन गर्न पहिलो कुरा। सजिलो soreness ध्यान लागि हानिकारक उत्पादनहरु प्रयोग गर्न बन्द गर्नुपर्छ। यसरी, को पाठ्यक्रम, कलेजो metastases निको गर्न असम्भव। लोक उपचार उपचार सामान्य अवस्था मात्र समर्थन र लक्षण केही देखि रोगी राहत हुनेछ।
प्राकृतिक तरल मह 150 एमएल थप्न उम्लिरहेको पानी 2500 एमएल यसलाई भर्न जई को 100 ग्राम वजन,: विकास एक पुरानो चरण मा पारित, रोग जोगिन, निम्न मध्यम प्रयोग गर्नुहोस्। बैंक बन्द र राख्न यो घण्टा न्यानो गाढा ठाउँमा खडा गर्न आवश्यक छ। 24 घण्टा पारित गरेपछि रूपमा पकाएको छैन गरिएका हालतमा त्यसैले, एक चिसो ठाउँमा राखेँ।6हप्तासम्म भोजन पछि एक दिन दुई पटक लिनुपर्छ।
ध्यान! कुनै पनि गैर-परम्परागत माध्यम, तपाईंले प्रयोग गर्न रुचि छ, मा metastases निको छैन जिगर। लोक उपचार को उपचार स्वतन्त्र बाहिर छैन लगे गर्न सकिन्छ। सुरुमा, आफ्नो चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस्।
अस्तित्व को दर के छ
एक कलेजो मेटास्टेसिस देखि एक रोगी दुःख को जीवन को अवधि स्पष्ट भएको असामान्यता निदान र उपचार विकल्प लिइएको छ कि जब निर्भर गर्दछ। तथ्याङ्क अनुसन्धान अनुसार, वर्णन विरामीहरु मात्र 10%5वर्ष को लागि बाँचिरहेका छौं। तर विकृति र समय थालेका उपचार5वर्ष अस्तित्व को प्रारम्भिक पत्ता लगाउने मा विरामीहरु को 40% अवलोकन गरिएको छ।
कलेजो transplantation 80% भन्दा लागि अस्तित्व को संभावना बढ्छ र अवस्थामा को 75% को अस्तित्व सुनिश्चित गर्दछ।
ओवन मा पकौडी
अनुकूलता लियो र मिथुन: साझेदार वा प्रेमीहरूको?
Bulgur के हो र यो खाना पकाउने मा प्रयोग गर्न सकिन्छ कसरी?
Mowers, तेल: ठीक परिवर्तन कसरी र सबै भन्दा राम्रो तरल खन्याउन कसरी
जो गद्दा राम्रो छ
फस्फोरस हीड्राकसीड - सूत्र गुण
अभिनेता केभिन Nealon: जीवनी, फोटो। सबैभन्दा चलचित्र र टिभी श्रृंखला